Diary Of Sainatkha
Posted on 11:21 PM by SAINATKHA and filed under |0Comments »
Windows ကွန်ပျူတာ သုံးစွဲသူများအတွက်သာ ရည်ရွယ်ပါတယ်..။
Mac ကွန်ပျူတာကတော့ ကျွန်တော် သိပ်နားမလည်ပါ..။
1. Start Menu—>> Click Run ကိုရွေးပါ။
၈. ပြီးလျှင် ညာဘက်ခြမ်းက Limit Reservable Bandwidth ဆိုတဲ့စာကြောင်းပေါ်မှာ
double Click နှိပ်ပါ။
၁၀. Bandwidth Limit [%] box မှာ 20%ကို0% ပြောင်းပြီး ok နှိပ်ထွက်ပါ။
Posted on 11:19 PM by SAINATKHA and filed under |0Comments »
Kaspersky Key (6.10.2009)
Posted on 12:10 AM by SAINATKHA and filed under |0Comments »
MIRC Program သည် နာမည်ကြီးတဲ့ Chatting Program တခုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုကျောင်းသား
အခုမှစလေ့လာသူများနဲ.လွယ်ကူစွာအိမ်မှာ install လုပ်ပြီးဝင်နိူင်ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။
အရင်ဦးဆုံး Mirc Software ကို ဒီနေရာမှာ Download လုပ်ပြီးယူပါ။Download လုပ်ပြီးကျလာပါက
ပုံတွင်ပြထားသည်အတိုင်း RAR File ကို Right Click နှိပ်ပြီး Extract Here ကိုနှိပ်ပါ။
ကျလာသော Folder ကိုဖွင့်ပြီး Mirc Setup ကို Click2နိပ်ပါ။(အပေါ်ပုံကိုကြည့်ပါ)
Installer Box ကျလာပါက Next ကိုဆက်နှိပ်ပါ။(အပေါ်ပုံကိုကြည့်ပါ)
နောက် Box တခုကျလာပါက Yes ကိုနှိပ်ပါ။(အပေါ်ပုံကိုကြည့်ပါ)
Install ကို Click နှိပ်ပါ။(အပေါ်ပုံကိုကြည့်ပါ)
Finish ကို Click နှိပ်ပါ။(အပေါ်ပုံကိုကြည့်ပါ)
Desktop ပေါ်တွင်ရှိ သော Mirc Shorcut ကို Click2ချက်နှိပ်ပါ။(အပေါ်ပုံကိုကြည့်ပါ)
Register လုပ်ရန်အတွက် Box ကျလာပါက Continue ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။(အပေါ်ပုံကိုကြည့်ပါ)
ကျလာသော Box တွင်ပုံမှာပြထားသည့်အတိုင်းမိမိ နာမည်၊Email Address ၊Chatting ၀င်မည့်
ပုံမှာပြထားသည့်အတိုင်း Servers ကို ကလစ်လုပ်ပါ။Edit ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။(အပေါ်ပုံကိုကြည့်ပါ)
ပုံမှာပြထားသည့်အတိုင်း Edit Server Box ကျလာပါက(အပေါ်ပုံကိုကြည့်ပါ)
Description တွင် Burmeseonline
IRC Server တွင် Hardcore.myanmarlinux.org
Port(s) တွင် 443
Group တွင် Ygnchat ဟုပြောင်းရိုက်ပါ။
ပုံမှာပြထားသည့်အတိုင်း Firewall ကိုကလစ်လုပ်ပါ။Firewall Support မှာ None ကိုပြောင်းပါ။
Protocol နေရာမှာ Proxy ထားသုံးပါ။Ok ဆက်နှိပ်ပါ။(အပေါ်ပုံကိုကြည့်ပါ)
Register တင်ရန်အတွက် ပုံမှာပြထားသည့်အတိုင်း Help မှ Register ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ကျလာသော Box တွင် Full name တွင် sainatkha
Registration Code တွင် 7654-806066 ဟုရိုက်ထည့်ပါ။ပြီးလျှင် Ok နှိပ်ပါ။Ok ဆက်နှိပ်ပါ။
ပုံမှာပြထားသည့်အတိုင်း မိုးကြိုးပုံကို Click နှိပ်ပါ။ခဏစောင့်ပါ။
ပုံမှာပြထားသည့်အတိုင်း Box တက်လာပါလိမ့်မည်။ Ok ကို Click နှိပ်ပါ။
ပုံမှာပြထားသည့်အတိုင်း BoX များကို Maximize လုပ်ပေးပါ။
ပုံမှာပြထားသည့်အတိုင်း မိမိ Chatting လုပ်လိုသောနာမည် ပေါ်တွင်2Click နှိပ်ပါ။
ပုံမှာပြထားသည့်အတိုင်း Hi ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။နောက်တယောက် Chat ချင်လျှင်
မည်။ထိုပေါ်လာသောစာသားကိုနှိပ်ပြီးပြန် Chat နိူင်ပါသည်။
Posted on 9:17 AM by SAINATKHA and filed under Chatting |0Comments »
Chinese စာရိုက်လိုသူများအတွက်အသုံးဝင်မယ် Website လေးပါ။သုံးချင်ရင်တော့အောင်မှာ Link ပေး
ထားပါတယ်။ ဒီနေရာကနေ ကလစ်နှိပ်ပြီးသွားနိူင်ပါတယ်။
Link: Online Chinese Keyboard
Posted on 10:56 PM by SAINATKHA and filed under Website |0Comments »
USB device safely remove (unlocker)
USB device တွေကို eject လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ပေါ်က လိုမျိုး message ပေါ်လာရင် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရတာ လူတိုင်းလိုလို ကြုံဖူးမယ် ထင်တယ်။ အရင်တုန်းကဆို application တွေ အားလုံးလိုက်ပိတ်ပြီးလို့မှ ဒီလို ထပ်ပေါ်နေသေးတယ်ဆိုရင် စိတ်မရှည်တော့ဘဲနဲ့ ဒီအတိုင်း ဆွဲဖြုတ်ပစ်လိုက်တာ များတယ်။
အခုမှ ဒီ unlocker ဆိုတဲ့ software လေးကို တွေ့သွားတာ။ တော်တော် လေးကို အသုံးဝင်ပါတယ်။ install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် USB device ပေါ်မှာ right click လုပ်လိုက်တာနဲ့ unlocker ဆိုတာ ကို ရွေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် သူပြထားတဲ့ process တွေကို “Kill Process” ဒါမှ မဟုတ် “unlock all” လုပ်လို့ပြီးသွားရင် USB ကို safely remove လုပ်လို့ ရသွားပါပြီ။
USB အတွက်ဘဲ အသုံးဝင်တာ မဟုတ်သေးဘူး။ တစ်ခါတစ်လေ file တွေ folder တွေ ကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် rename လုပ်လို့မရ delete လုပ်လို့မရ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီအခါမှာလည်း file/folder ပေါ်မှာ right click လုပ်ပြီး unlock လုပ်လိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။
Unlocker က freeware ဖြစ်တဲ့အတွက် http://ccollomb.free.fr/unlocker/ မှာ free download လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Posted on 10:37 PM by SAINATKHA and filed under USB |0Comments »
@Kaspersky Key (6.10.2009)
@Software မပါပဲ Drive ၊ Folder lock ချရအောင်
@Total Video Converter
@Window XP တင်နည်းစာအုပ်
@SMS Free Website
@မြန်မာအနုပညာရှင် Website များ
@Gmail မှ မဖွင့်ဖတ်ရသေးတဲ့စာများ
@FREE Hi-Q Recorder
@Gmail မှEnglish to Myanmar (Dictionary)
@Timer နှင့် Shutdown
@ချစ်သူတွေအတွက် Fancy Program
@Network အကြောင်းသိကောင်းစရာ (၁)
@Gmail Inbox Preview
@Myanmar Blogger များဖတ်ရန်
@မြန်မာလိုရေးထားသော Ebook များ
@မိမိရေးထားသောစာများကို Mp3 ပြုလုပ်နည်း
@Internet Download Manager (Full Version)
@အသုံးမလိုတော့တဲ့ software ဖြုတ်မယ်
@Internet Cafe Software (Free Version)
@Gmail Password ခိုးရအောင်(Golden Eye)
@Website တွေဘယ်ချိန်ကပေါ်ခဲ့လဲ ?
@GTalk မှာ Webcam နဲ.စကားပြောနိူင်ပြီ။
@Website တခုလုံး Download ဆွဲခြင်း။
@မိမိGmail Addressရဲ. နာမည်ကိုမကျန်ခဲ့စေအောင်
@Shutdown Virus ပြုလုပ်နည်း
@ဆော့ဝဲမပါဘဲ Folder လော့ချတဲ့ နည်း
@Deep Freeze အသုံးပြုနည်း
@Deep Freeze Uninstall လုပ်နည်း
@Gmail ထဲမှ Forward စာများစုစည်းမူ
@Task Manager ပျောက်နေရင်
@Gtalk မှာကိုယ့်ကို Block လုပ်ထားလား?
@Invisable(မီးခိုရောင်) နဲ့ Chat နေလား
@Gmail စာမျက်နှာကို မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပုံပြောင်းနည်း။
@Windows XP Password ဖောက်နည်း။
@ဆာ့ဝဲလ်တွေ ခရက်ကီးတွေ လိုချင်တဲ့သူများရှာလို့ရမဲ့ ဆိုဒ်
@Satellite ကနေ GSM Network
@Gtalk မှာ Offline ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နည်း။
@Notepad မှာ အချိန် နှင့် နေ့ရက်ကိုအော်တိုထည့်ရအောင်။
@Gmail ထဲမှာ Insert emoticon
@short-cuts key များ
@Gtalk ကနေ Worldwide ဖုန်းသရဲလုပ်ကြရအောင်
@Gtalk မှာ zawgyi font ပြင်နည်း
@ပုံများကို စာသားဖြင့် ပြောင်းနည်း
@အလုပ်မလုပ်တော့တဲ့ Programs တွေကို ပိတ်ခြင်း
@စက်တလုံးထဲတွင် Gtalk Account များစွာဖွင့်နိူင်ရန်
@Files တွေမှာ Virusရှိမရှိ ကြည့်ရုံနဲ့ သိနိုင်မလား
@Buglish မှ မြန်မာစာသို.ပြောင်းပေးခြင်း။
@keyboard ရဲ. Network အချက်ပြမီး။
@Gtalk တွင် ဘာသာပြန်စနစ် ထည့်သွင်းနည်း
@Gmail Password ပြောင်းနည်း။
@Data Capacity အတိုင်းအတာယူနစ်။
@အသုံးပြုနေကြ Run စာသာများ
@Key Board ဖြင့် Mouse အသုံးပြုနည်း။
@Mouse ဖြင့် key board အသုံးပြုနည်း။
စိုင်းနက္ခ ရဲ.နည်းပညာမှတ်တမ်း © 2008 by စိုင်းနက္ခ ရဲ.နည်းပညာမှတ်တမ်း | Designed by Design Blog | Blogger Template by ThemeLib.com